Flame cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi Ishidi
Ukuhlolwa kweshidi le-ESD
Isiphuzo namanzi asemabhodleleni
Ukulawulwa kwe-R & D
Yethula i-pp corflute tree guard
Singumkhiqizi omkhulu wokuqashwa kwezihlahla ze-corflute tree eChina.Imithi yokuqashwa kwemithi yenziwe nge-pp corflute, ishidi likapulasitiki elinamapulangwe, ipulasitiki eqinile, ingavikela isihlahla, singangeza i-UV, singaphrinta ilogo nokunye. Ziqinile kakhulu, zishesha kakhulu ukufaka futhi zihlala zibukeka zide kakhulu kunezinye ze ...
I-PP BOX yeZOLIMO
1 ， Ukupholisa I-Hydro Inselelo: Ukulondoloza ukushaqeka isikhathi eside kakhulu, imifino ethile ithelwa ngamanzi apholile ukumisa inqubo yokuvuthwa. Ukupakisha kwendabuko okufana nezitsha ezihlanganisiwe zikathayela noma eziboshwe ngocingo kusinda, kunzima ukukusebenzisa, futhi ukusebenza kwazo kungalimaza i-durin ...
Shandong Runping Plastic-abadumile ifektri umphakeli
I-Shandong Runping Plastic Industrial co., Ltd ingumhlinzeki odumile wefektri wemikhiqizo lukathayela eyakhiwe.Own imigqa engu-11 yokukhiqiza kanye neworkshop ehlanzekile. Ikakhulukazi imikhiqizo njengokulandelayo: ama-pp amashidi amashidi, imiqulu, yokuvikelwa phansi, ukuvikelwa kwentambo i-Pp correx box, yezithelo ezintsha nemifino packin ...
Ukusetshenziswa Kwepulasitiki Esetshenzisiwe Ekuvikelweni Kwezemvelo
Ukuvikelwa kwemvelo kuyinkinga enkulu ebhekene nezwe lanamuhla. Ngokuqondile ngalesi sizathu, kulo msebenzi, wethu uhlola izici zawo ezihlukile. Ngokombono wokongiwa kwemithombo yemvelo nokonga amandla, ukufakwa kwezinto zokuqala ngokusebenzisa i-recycling kuqhuma ...
Ungalihlukanisa kanjani ikhwalithi yebhodi lepulasitiki elingenalutho？
I-PP plastic inezici zobuningi obuphansi, obungewona ubuthi, obungenambala, obungenaphunga, ukumelana nokugqwala, nokumelana okuhle nokushisa. Ngokusebenzisa ilangabi cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi ukuguqulwa, singasebenza izingxenye nge ilangabi cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi ngezinto zikagesi, izimoto kanye nezinye izinkambu ukuhlangabezana r ...
Ibhokisi lokubuyisa le-PP
Ibhokisi lenzuzo elitholakalayo lingasebenzisana nezinhlobonhlobo zeziqukathi zokuphathwa kwezinto nezindawo zokusebenza, futhi lingasetshenziswa ezinqolobaneni ezahlukahlukene, ezindaweni zokukhiqiza nakwezinye izikhathi. Ibhokisi lenzuzo lisiza ukwenziwa nokuhlanganiswa kweziqukathi zokuphathwa kwezinto. Kuyinto imikhiqizo edingekayo ...
Somos fabricantes de cajas de plástico corrugado, las cuales indodana consideradas como la Evolucion de las cajas de ibhokisi, ya que cuentan con muchas características que indodana esenciales hoy zu día para el Movimiento Interno ó externo de diferentes Productos que requieren protecciones Especiales. I-Almac ...
I-Laminas de Plástico Corrugado
I-Laminas de Plástico Corrugado, tambien llamado carton plástico o coroplast, etholakala en diferentes colores y espesores de 2, 3, 4, 5, 6,8, y 10 mm. En 1.22 m (48 ″) de ancho X 2.44 m (96 ″) de largo. I-para uso en separadores de piezas cosmeticas en la industria automotriz, manejamos laminas con recu ...
Izinto ezifanelekayo ze-Graphics and Construction
Amashidi epulasitiki akhiqiziwe abizwa nangokuthi i-Corrugated Plastic Cardboard, amashidi weCoroplast, i-Waterproof Cardboard, angamashidi amapulasitiki odonga angamawele ahlukaniswe yimishayo emincane epulasitiki egijimisa kuwo. Ilungele izimboni eziningi kubandakanya ukwakhiwa, izimpawu, ukukhangisa, ukubonisa ihluzo, isikrini ...
Ukusebenza okusha kuma-Packaging Industries
Ibhokisi lokupakisha lebhodi elingenalutho lePlastiki linokumelana okuhle kakhulu komswakama, ukumelana namanzi, ukumelana namazinga okushisa aphansi, isisindo esincane namandla amakhulu, okungeyona into enobuthi, ukuvikelwa kwemvelo, okuphinda kusetshenziswe futhi kuvuseleleke kabusha, njll. Ngenxa yesisindo sayo esincane namandla amakhulu, ukusebenza kahle kokuqinisa, kuhle ...
Isakhiwo somkhiqizo weshidi elingenalutho
Ishidi elingenalutho le-PP luhlobo lweshidi olukhiqizwa ngqo ngumugqa wokudweba ishidi ongenalutho. Ingasikwa futhi icindezelwe kumikhiqizo ehlukahlukene eqhutshwe ngokujulile. Isakhiwo esithile somkhiqizo simi ngokulandelayo: 1. Amapuleti angenalutho: njengama-gaskets, ama-disc, amapuleti angemuva, abanikazi bangemuva, abanikazi bamabhodlela, njll.
Ama-Pallet Layer Pads
Amapayipi wesendlalelo sePallet enziwe ngeplastiki ye-PP yisixazululo esingenaluthuli sezindawo zokukhiqiza nezimpahla ezinezidingo eziphakeme zenhlanzeko. Izendlalelo zivimbela umswakama kusuka kuma-pallet okhuni ukudlulisela kuzimpahla. Izendlalelo azithintwa ngamanzi, uwoyela namakhemikhali, futhi zingasetshenziswa emazingeni okushisa ...
Isixhumanisi: www.knpl.cn lindokuhle.com
Ihhovisi laseChina: NO.13887, indawo yezimboni weifang, shandong, China
Usa office: ikheli elihle kakhulu le-twinwall plast: 8605 santa monica blvd # 79525 west hollywood california 90069-4109 usa
Ucingo: 0086 13355279991